🥇 ▷ In kabadan nus milyan nuqul oo guul ah ayaa lagu iibiyaa dukaanka ciyaaraha Epic Games ✅
In kabadan nus milyan nuqul oo guul ah ayaa lagu iibiyaa dukaanka ciyaaraha Epic Games
Jace Varlet, oo ah soosaaraha Koontaroolka Kafee ‘Coffee’, ayaa ku dhawaaqay in Shirkadda Satisfactory ay illaa hadda iibisay wax ka badan nus milyan nuqulo. Ciyaarta waxaa lagu heli karaa marin u helitaanka bilowga kaliya ee makhaayadaha ‘Epic Games Store’ mana jiro qof filaya guulahaas oo kale.
Miyayna ahayn inaynaan qaadin Bakhaarka Ciyaaraha Epic…?
QancintaCiyaarta aan u ciyaarnay sidii naqshadeeye warshad ayaa iibiyay 507374 nuqul – Kani waa macluumaad ay siiyeen Barnaamijka Bulshadda Kafee Buruqda Studiyaha iyo Maareeyaha Jace Varlet. Soosaaraha wuxuu ku leeyahay qoraal qoraal ah fiidiyowga la dhejiyay usbuuc ka dib markii uu soo qorey qoraallo xiisa badan, halkaas oo uu ku sheegay in cinwaanka gaarka ah ee ciyaarta ‘Epic Games Store’ ay si xun u iibineysay.
Taasi waa dhan…? Ah
Tani waa siideynteena ugufiican ee loo yaqaan ‘Curls Coffee’, sidaa darteed runtii waa qabow. Waxay dhaaftay dhamaan wixii aan ka fileynay. Tani waa wax la yaab leh, ayuu yidhi Varlet.
Qancinta, oo ah isku darka FPS oo ay ka mid yihiin cunsuriyadda istiraatiijiyadda dhaqaalaha iyo cayaaraha jilitaanka, ayaa lagu dhawaaqay barnaamijka PC Gaming Show sanadkii hore. Inta badan muranku wuxuu ka dhashay xaqiiqda ah in horumariyeyaasha ciyaarta ay go’aansadeen inay heshiis gaar ah la saxeexaan dukaanka Ciyaaraha Epic. Tan iyo markii la bilaabay marin habaabinta bilowga ciyaarta bishii Maarso, macluumaadka iibka lama shaacin, Varlet ayaa si rasmi ah u sheegtay. Xusuus-qorka ciyaarta ee Twitter halkaas oo la iibiyay kumannaan ama in ka badan oo nuqul ah.
Si kastaba ha noqotee, waxay ku guuleysatay inay iibiso wax ka badan nus milyan nuqulo wax ka yar saddex bilood. Qancinta Dhab ahaantii waa guul. Iibinta dukaanka Ciyaaraha ee Epic, oo ahayd musiibo yar, ayaa sidoo kale ku biirin kara guusha. Si kastaba ha noqotee, Varlet wuxuu qirey in qofna istuudiyaha uusan ogeyn waxa la filan karo marka la sameynayo ciyaaro, sababtoo ah Qancinta Waa cinwaan caan ah.
Macluumaadkani waa muhiim maxaa yeelay qaar ka mid ah horumariyaasha ayaa ilaa iyo hadda go’aansaday inay bixiyaan faahfaahinta iibinta magacyadooda gaarka ah ee Dukaanka Epic Games Store. Mid ka mid ah ciyaarihii ugu horreeyay ee ka soo muuqan doona masraxa cusub wuxuu ahaa Metro Ex, laakiin THQ Nordic, daabacaha ciyaarta, wuxuu shaaca ka qaaday in ciyaartu ay iibisay laba jeer iyo badh ka wanaagsan kan Metro: Light Light on Steam. Si kastaba ha noqotee, tirooyinkaasi aad ayey u yar yihiin.
Qancinta natiijooyinka iibka Waxay muujineysaa in cayaaraha gaarka ah ee laga heli karo Dukaanka Ciyaaraha Epic aysan qasab aheyn inay noqdaan kuwa aan fiicneyn, xitaa haddii ay yihiin cayaaraha iskeed u taagan. Suuqa laftiisa ayaa yeelan kara wado dheer oo ay ku marto ka hor inta uusan la tartami karin Steam, laakiin sidaad u aragto, kama dhigeyso dadka inay ka cagajiidaan inay ku ciyaaraan ciyaarta.